धरहरा पुनःनिर्माण अबको ८ महिनामाNepalpana - Nepal's Digital Online
बिहिवार, बैशाख ३० गते २०७८
२०७८, बैशाख ३० गते
# महेश बस्नेत
# महन्थ ठाकुर
धरहरा पुनःनिर्माण अबको ८ महिनामा
नेपालपाना पौष २ २०७७
काठमाडौँ । धरहरा चढेर काठमाडौँ शहर नियाल्ने रहर पूरा गर्न नेपाली जनताले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
बीसौँ तलाको धरहराको शिरानी तलाको अहिले ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्म पुनःनिर्माणको ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । गोरखा भूकम्पको तीन वर्षपछि मात्रै सो सम्पदाको पुनःनिर्माणको कामले गति लिएको हो ।
भूकम्पले ढलेको भीमसेनस्तम्भ पुनःनिर्माणको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत् रुपमा २०७५ पुस १२ गते उद्घाटन गरेका हुन् । मुख्तियार भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा पत्नी त्रिपुरासुन्दरीको सम्झनामा निर्माण गर्न लगाएको ११ तले धरहरालाई नब्बे सालको भूकम्पले क्षति पारेपछि नौतले बनाइएको थियो ।
दुई वर्षका अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हिजोआज निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धर शुरुआती चरणमा तीव्र रुपमा निर्माणको काम भए पनि पछिल्लो समय सोहीअनुरुप काम अघि बढ्न नसक्दा थप गरिएका समयमा पनि काम सकिन्छ भन्नेमा शङ्का उब्जिएको बताए । कोरोना महामारी र अन्य केही आन्तरिक समस्याका कारण निर्धारित समयमै काम पूरा नहुने भएपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आठ महिना समय थप गरिदिएको छ ।
नेपाली र केही भारतीयसहित दैनिक १५० कामदार नियमित रुपमा निर्माणमा जुटिरहेका छन् । धरहरा पुनःनिर्माणका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम श्रेष्ठ आफूहरुले प्राधिकरणसँग थप २१ महिनाको समय माग गरेको तर आठ महिना मात्रै थपिएको बताए । त्यसकारण थप समयभित्र सबै काम सक्न मुश्किलै छ । “धरहरा निर्माणको मुख्य काम सकिन्छ तर सौन्दर्य अभिवृद्धि र पार्किङको काम पनि धेरै रहेकाले फेरि समय थप्नुपर्ने हुनसक्छ”, म्यानेजर श्रेष्ठले भने ।
उनका अनुसार ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ढुङ्गेधाराबाट निरन्तर पानी खस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । रमन कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको धरहराको पुनःनिर्माणमा रु तीन अर्ब ४८ करोड खर्च लाग्ने बताइएको छ । पहिलाको धरहराभन्दा नयाँ बन्ने धरहरा थप चौडा हुनेछ । यहाँ दुई लिफ्ट रहने छन् । साथै एउटा परम्परागत भ¥याङ पनि हुनेछ । आगन्तुकले दुईमध्ये एक रोजेर प्रयोग गर्न सक्छन् ।-रासस
'धर्म र संस्कृति जाति विशेषका नभई साझा हुँदै गएका छन्'
सन् २०२२ मा पर्यटक निकै बढ्ने मन्त्री भट्टराईको अनुमान
‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को नारा काठमाडौंमा गुञ्जियो
श्रम स्वीकृति लिएर मात्र टिकट काट्न आग्रह
पौष २, २०७७ बिहिवार ११:२९:४१ बजे : प्रकाशित
हिन्दूको पवित्रस्थल पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्ने क्रिश्चियनलाई धपाइयो
बारामा खेत खन्दा भेटियो १३ औं शताब्दीको विष्णुको मूर्ति, लम्बाई मात्रै ७ फिट
बूढानीलकण्ठ मन्दिर आजदेखि भक्तजनका लागि खुला
आफु हुने भन्दा पनि ओलीलाई डुबानउने प्रवृतिमा बाबुराम, अझैं छोडेनन् विरोध !
कांग्रेसको बहुमत पुगेन, माओवादी सकियो : यसरी ढुक्कसँग ओली प्रधानमन्त्री !
ओली-नेपाल मिलेसँगै माओवादीमा हरिविजोग, एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा नेताहरु !
ओली फेरि बहुमतकै प्रधानमन्त्री, यस्तो छ अंकगणित
अन्तत: एमाले एकता जोगिएको घोषणा, फुटकाे फाइदा लिन खाेज्नेहरूमाथि विष्णु रिजालले हाने अस्त्र !
नयाँ सरकारमा दाबी नगर्ने कांग्रेसको निर्णय, ओलीलाई औपचारिक रुपमै खुल्यो बाटो
चार घण्टा वार्तापछि ओली र माधव नेपालको कुरा मिल्यो, अन्तत: विपक्षी गठबन्धनको खेल खत्तम
सबै मेहनत खेर गयो, बुढानिलकण्ठबाट रित्तो हात फर्किए प्रचण्ड